Foddaa Ajajoota keessaa baafata halqara baniitii, Quunnamtiifiladhu
Iddooqa lamaa waliin mallattoo walqixaa (=) saagi. Dabalataan <?> = <?> foddaa Ajajoota keessatti kallattiin barreessuu ni dandeessa.
wal qixa mitii
Sajoon yookaan ajajni neq kun iddooqa lamaa waliin hima walcaalma saagi. Dabalataan <?> neq <?> foddaa Ajajoota keessatti barreessuu ni dandessa.
Iddooqa lamaa waliin arfii hariiroo walfakkaataa (roggita) saagi. Dabalataan <?> equiv <?> foddaa Ajajoota keessatti barreessuu ni dandeessa.
Iddooqa lamaa waliin arfii hariiroo ortoogonaalii (kofa sirri) saagi. Dabalataan <?> ortho <?>foddaa Ajajoota keessatti barreessuu ni dandeessa.
Arfii qoodiile saagi. Dabalataan <?> qoodiile <?> foddaa Ajajoota keessatti barreessuu ni dandeessa.
Sajoon kun arfii hin qoodamu saagi. Dabalataan <?>ndivides<?> foddaa Ajajoota keesssatti barreessuu ni dandeessa.
Hariiroo irraa xiqqaa saagi. Dabalataan <?>lt<?> ykn <?> < <?> foddaa Ajajoota keesssatti barreessuu ni dandeessa.
Hariiroo irra guddaa saagi. Dabalataan <?> gt <?> ykn <?> > <?> foddaa Ajajoota keessatti barreessuu ni dandeessa.
Iddooqa lamaa waliin hariiroo walqixatti Dhiihaat saagi. Dabalataan <?> approx <?> foddaa Ajajoota keessatti barreessuu ni dandeessa.
Iddooqa lamaa waliin hariiroo walmaddii saagi. Dabalataan <?>parallel<?> foddaa Ajajoota keessatti barreessuu ni dandeessa.
irra xiqqaa yookaan walqixa (duufa'e)
Iddooqa lamaa waliin hariiroo irra xiqqaa yookaan walqixa saagi. Dabalataan <?> leslant <?> foddaa Ajajoota keessatti barreessu ni dandeessa.
irra guddaa yookaan walqixa (duufa'e)
Iddooqa lamaa waliin hariiroo irra guddaa ykn walqixa saagi. Dabalataan <?>geslant<?> foddaa Ajajoota keessatti barreessuu ni dandeessa.
walffakaata ykn walqixa
Iddooqa lamaa waliin hariiroo walffakaata ykn walqixa saagi. Dabalataan <?>simeq<?> foddaa Ajajoota keessatti barressuu ni dandeessa.
Iddooqa lamaa waliin hariiroo gitaa'aa walii saagi. Dabalataan <?> prop <?>foddaa Ajajoota keessatti barreessuu ni dandeessa.
Iddooqa lamaa waliin hariiroo irra xiqqa ykn walqixa saagi. Dabalataan <?> le <?> ykn <?> <= <?> foddaa Ajajoota keessatti barressuu ni dandeessa.
irra gudda ykn walqixa dha
Iddooqa lamaa waliin hariiroo irra gudda ykn walqixa dha saagi. Dabalataan <?> ge <?> ykn <?> >= <?> foddaa Ajajoota keessatti barreessuu ni dandeessa.
Sajoon kun hariiroo walfakkaataa iddooqa lamalamaa waliin saaga. Dabaltaan <?>sim<?> foddaa Ajajoota keessatti barreessuu ni dandeessa.
Iddooqa lamaa waliin gara mallatto hariirootti saagi. Dabalataan <?> toward <?> foddaa Ajajoota keessatti barreessuu ni dandeessa.
xiyya lama bitatti akeekan
Yaayaa hariiroo xiyya kabala lamaa gara bitaa akeekansaaga. Fodda Ajaja keessattis dlarrow barreessuu ni dandeessa.
xiyya lama bita fi mirgatti akeekan
Yaayaa hariiroo xiyya kabala lamaa gara bitaa fi mirgatti akeekan ogeejjii lamaa waliin saaga. Fodda Ajaja keessattis dlrarrow barreessuu ni dandeessa..
xiyya lama mirgatti akeekan
Iddooqa lamaa waliin yaayaa ogeejjii xiyya kabala lamaa gara mirgaa akeekan saaga. Fodda Ajaja keessattis drarrow barreessuu ni dandeessa.
Iddooqa lamaan hariiroo daran irra guddaa uumuuf, <?> gg <?> ykn >> foddaa Ajajoota keessatti barreessi.
ll ykn << foddaa Ajajoota keessatti Hariiroo daran irra xiqqaa foormulaa keessatti saaguuf barreessi.
Hariiroon akkasitti hiikama iddooqa lamaa waliin <?>def<?>barreessuni saagamu.
Arfii walgittaa tiin fakkii iddooqa lamaa waliin <?> transl <?> foddaa Ajajoota keessatti barreessuun saagi.
Ajajni <?>transr<?> kun arfii wagittaa xabboo...dhaan iddooqa lamaa waliin saaga.
Yeroo foddaa Ajaja tiin odeefannoo hujeekaan galchiinu, caasaa sirri lakkoofsa ogeejjii iddoo barbaachisuu yaadadha. Kun keessumattu kan dhugoomu yoo atii iddooqarra gatiitti hojjeecha jiraatte dha. Fakkeenyaaf, hariiroo "tilmaaman irra caala" , 10 gg 1 ykn a gg bbarreessi.